Semalt: Ukulwa nokukhusela i-Spam Imeyili
Zonke iinkqubo ze-intanethi zidibana nokuhlaselwa kwe-spam mass. Uninzi lwabantu abasebenzisa lewebhuUbomi bemihla ngemihla idibanisa ii-imeyile ezithi zibonelele ngenkonzo ethile. I-Spammers ijolise iiphaneli eziphezulu zomlawuli wewebhsayithi, kunye nokunyenolunye ulwazi oluncedo. Kwixesha elidlulileyo, abagaxekile bathathe amaninzi amaphasiwedi womsebenzisi kunye nolwazi lomntu siqu, kunye nezinye iinkalo ezahlukeneyolokuqinisekisa ukuba i-website isebenza ngokufanelekileyo. Bangakwazi nokuzisa i-e-commerce phantsi, ekhokelela ekulahlekeni kwe-e-commerce enkulu. Yonke i-SEOiinzame zingaphantsi ngenxa yokuhlaselwa kwe-spam yangempela.
Ukuhlala kude nogaxekile kungaba yingqiqo ekhethekileyo kwi-website entsha. OMatrikiUmphathi Wempumelelo yoMthengi iSemalt ,UJack Miller, uchaza ezinye iindlela zokulwa kwaye ahambe kude nogaxekile:
1. Sebenzisa idilesi ye-imeyile ekhuselekileyo
Amanyathelo okukhusela anikezelayo nge-intanethi akhona.Ngokomzekelo, banokubangela ukuba abasebenzisi babandezeleke ngengozi okanye bathuthukise umsebenzi we-spammers. Kubalulekile ukuqwalasela ukusebenzisa ukhuselekileidilesi yemeyile. I-Gmail ne-Outlook inezinye iilesi ze-imeyili ezikhuselekileyo namhlanje. Ezinye iimeko zingakuqinisekisa ukukhuselwaikhomputha usebenzisa iindlela zakamuva zokukhusela i-spyware.
2. Gcina idilesi yakho ye-imeyile iphephile
Bonke abagaxekile baqala ngokwenza iqoqo leedilesi ezininzi..Zeziiithagethi ezihambisa ukuhlaselwa kogaxekile. Kukho iindlela ezahlukeneyo ze-IT zokusingatha nokukhetha ugaxekile. Ungasebenzisa i-imeyile eyahlukileyoiidilesi zeendlela ezahlukeneyo ze-intanethi. Ngaphezu koko, kukho ukukhethwa kukho ukufaka iifolda ezininzi kwidilesi yakho ye-imeyile yangoku.Lo mqathango ungagcina i-imeyli yogaxekile kwifolda ongayibeka ngokulula, kwaye ungawadibanisi ne-imeyile ebalulekileyo.
Ukusuka ngasentla, kubalulekile ukusebenzisa isicwangciso se-imeyile esinikezelayo. ImeyiliAbaboneleli ngeGmail baqulethe izihlunu zogaxekile ezingayicoca ezinye zeentlobo zokuhlaselwa kogaxekile. Izihlungi ze-Spa zibona kwaye zitshintshe ii-imeyile ezikhoyougaxekile kwifolda yogaxekile, apho unokukwazi ukukhetha ukuba ngubani na onokukukhonza.
4. Ungaqakraza ii-link kwi-spam
Kule ngcamango, kucacile ukuba ii-imeyile ezigaxekile ziqukethe ii-URL ezininzi kwiindawo ezahlukeneyoimisebenzi. Yonke le mi sebenzi ivela kubantu abafana nabahlaseli, abanesisusa esingathandabuzekiyo emva kokuhlaselwa kwee-imeyili. I-imeyli yogaxekileziqulethe ikhonkco ezibhekiselele kwiindawo ezinobungozi. Bakwazi ukwenza ezinye zezinto zokukhwaza njenge-hooking browser browserkwidivaysi ye Linux yokuqhawula kude.
Zininzi iindlela zogaxekile kwiwebhu. Abasebenzisi abaninzi be-intanethi bafumana ugaxekileimisebenzi yabo yemihla ngemihla. Ama-imeyili anokuqulethe ugaxekile avela kubantu abanobuchule obunobungozi nabangalunganga emva kwamaxhoba.Ugaxekile uletha amawaka eemali kubasebenzisi abangenacala be-intanethi. Ukuyeka kude nogaxekile kunokulondoloza i-e-commerce yakho ukuzinza kwayo kunyeukhuseleko lomntu wenkcazelo yomthengi. Ezinye zeendlela zokulwa kunye nokuphepha ugaxekile zikho kwesi sikhokelo. Unako ukulawulangokwakho kunye nokukhuselwa kwewebhusayithi yakho kwi-spam. Ungakwazi kwakhona ukugcina ugaxekile kude nesayithi okanye kubaxumi.